Talọ oriri na ọ Mobileụ Mobileụ Mobile Social Consumer Trends 2012 | Martech Zone
Enweela ọtụtụ ihe akaebe na mmetụta nke ekwentị na ụdị azụmaahịa a na-erekarị, mana ekwesịrị ịmara na omume ndị na-ere ahịa na ndị na-elekọta mmadụ (MoSoCo) na-enwe mmetụta dị ukwuu na ụlọ oriri na ọ restaurantụ andụ na ọrụ ndị ọbịa.
Ngwa nyiwe na mbadamba ihe eji eme ihe abiala ihe eji emeputa teknụzụ a, ọ bụghị ihe ijuanya na ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, nri & ile ọbịa na-ejide site na ịkwanye na Nke a Restaurant Mobile Social Consumer Trend Report nke DigitalCoCo na Restaurant Social Media Index wetara gị, anyị ga-elele ụdị ndị na-eji mpaghara ọhụụ nke ekwentị mkpanaaka na nke kacha mma maka njikọta ndị ahịa. Site na Mobile Social Consumer nke 2012
Tags: geolocationọbịaọrụ dabere na ọnọdụAkpanrestaurantụlọ ọrụ nri
Dec 3, 2012 na 2:55 PM
Nke a bụ data bara uru n'ezie, ọ bụghị naanị maka ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. Echere m na ọ na-ekwu okwu maka obere ụlọ ọrụ ọ bụla, ndị mmadụ na-amalite inwe mmekọrịta mmekọrịta n'etiti ọha na eze ebe ha nọ na ihe ha masịrị na ndị na-adịghị amasị ha. Ihe nchoputa mbu nke mbu nke 2 bu nke m bu ihe di nkpa n'ofe osisi: Ebe ma nyocha. Nnukwu data maka obere azụmaahịa ọ bụla ị paya ntị na ya.